I-imeyili ROI: I-No Brainer ye-Large Corporation | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 13, 2007 NgoLwesibili, ngoJulayi 15, i-2014 Douglas Karr
Sibe nomhlangano omuhle nenkampani kazwelonke namuhla futhi saxoxa ngokubeka uhlelo lwe-imeyili endaweni yalo. Le nkampani inamakhasimende angaphezu kuka-125,000 ezweni lonke, abathengisi abangu-4,000… futhi alukho uhlelo lwe-imeyili. Banemikhiqizo engama-8,000 enemikhiqizo emisha engama-40 noma engama-50 njalo ngenyanga abakhiqizi abafela ukuba bayithengise. Bakhathazekile nge- izindleko yohlelo lwe-imeyili noma kunjalo futhi bayazibuza ukuthi imali izoqhamukaphi.
Lobu bobunye bobudlelwano engifisa ukuthi ngibuhlanganise mahhala futhi ngivele ngikhokhise ikhomishini!
Esibonelweni esingenhla, ngicabanga ukuthi bangathola ikheli le-imeyili leklayenti elilodwa kwamakhasimende ama-1 ekupheleni konyaka. Eqinisweni, uhlelo kufanele lukhiqize inzalo eningi kakhulu nama-imeyili amaningi, kepha ngifuna ukuba sohlangothini oluphephile. Ngilinganisela i-imeyili engu-3 ngenyanga - hhayi ngeviki. Iklayenti ngalinye selivele liyathenga njalo ngenyanga, ngakho-ke i-imeyili ikhona ngempela ukuzama ukukhulisa ukuthengisa kusuka kumakhasimende akhona. Ngiphose inani lokuphendula elibuhlungu elingu-1% ngemali emaphakathi (ebambelele kakhulu) engu- $ 0.75 ekusetshenzisweni okungeziwe. Kumhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili, ngingeze i- $ 5 nge-imeyili ngayinye… ohlangothini oluphakeme.
Ngazo zonke lezi zilinganiso ezilandelanayo, okukhishwayo kusabuyisa ngokumangalisayo ama-25% ku-Investment. Ngokwengeziwe, i-imeyili izoshayela ama-oda amaningi ngesiza sawo se-ecommerce - isindisa kuma-oda anephutha nezindleko zabasebenzi. Ngaphezu kwalokho, lapho abathengisi babo begijimela ukunakwa, inkampani ingathengisa isikhala sokukhangisa se-premium ezincwadini zabo zezindaba! Ngibuyekeze izindleko zokukhangisa encwadini yezimboni eyodwa namuhla futhi isikhangiso esimaphakathi besingu- $ 0.02 nge-imeyili ngayinye futhi bekunezindawo ezi-4 encwadini ngayinye yezindaba.
Ukuthengisa izindawo ezi-4 ku-imeyili ngayinye kungadudula i-ROI ngaphezulu kwama-300%!
Ngineqiniso ngifisa sengathi bangathola ukuthi bazokuthola kanjani lokhu.
Tags: izindleko zalowo obhalisileukubuyiselwa kwe-imeyili ekutshalweni kwemaliIbhizinisibuyela kutshalomaliimali nge-imeyili ngayinyeinani lobhalisile